धान उत्पादनमा ९ प्रतिशतले वृद्धि ! « News24 : Premium News Channel
धान उत्पादनमा ९ प्रतिशतले वृद्धि !
काठमाडौं । नेपालमा यसवर्ष धान उत्पादनमा ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष नेपालमा ५६ लाख १० हजार ११ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको हो ।
गतवर्ष ५१ लाख ५१ हजार ९ सय २५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । गत वर्षभन्दा धान रोपाईं गरिएको खेत पनि वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष १४ लाख ६९ हजार ५ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती भएकोमा यसवर्ष १४ लाख ९१ हजार ७ सय ४४ हेक्टरमा धान खेती भएको हो ।
प्रदेशगत हिसाबले सबैभन्दा धेरै प्रदेश दुईमा धान उत्पादन भएको छ । प्रदेश दुईमा १४ लाख ९५ हजार ४४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । त्यस्तै प्रदेश १ मा १२ लाख ३७ हजार ९ सय ५२, प्रदेश ५ मा ११ लाख ८८ हजार ६ सय ७५ मेट्रिक टन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ लाख ५ हजार ६ सय २६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ ।
प्रदेश ३ मा ५ लाख २१ हजार ४ सय ४६, गण्डकी प्रदेशमा ४ लाख २७ हजार ६ सय ८९ र कर्णालीमा १ लाख ३३ हजार ५ सय ७९ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।